इन्स्टाग्राममा आईजीटीभी- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
गुगल अर्थमा दूरी मापक
काठमाडौँ — बानेश्वरदेखि बौद्ध कति किलोमिटर छ ? स्वयम्भूदेखि रत्नपार्क कति टाढा पर्ला ? प्रयोगकर्ताको यस्तै खालको जिज्ञासा मेटाउने गरी गुगल अर्थले नयाँ फिचर सुरु गरेको छ । दूरी नाप्ने यो सुविधा अहिले गुगल अर्थको क्रोम र एन्ड्रोइड भर्सनमा मात्रै उपलब्ध छ ।
यसमा प्रयोगकर्ताले डिस्ट्यान्स मेजर अप्सनमा छानेर कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्मको दूरी जान्नुपर्ने हो छान्न सक्छन् । यसमा एक ठाउँदेखि अर्को एक ठाउँसम्मको दूरी मात्रै होइनन् कि प्रयोगकर्ताले विभिन्न ठाउँको दूरी एकै पटक नाप्न पनि सक्छन् । एउटा पार्क वा चोकको गोलाइ, लम्बाइ, एउटा बस्तीको क्षेत्रफलसमेत यसमा नाप्न सकिन्छ ।